Ururrada dhaqatiirta iyo wasarada caafimadka oo saaka lagu wado in ay ka wada hadlan shaqajoojinta dhaqatiirta – The Voice of Northeastern Kenya
Ururrada dhaqatiirta iyo wasarada caafimadka oo saaka lagu wado in ay ka wada hadlan shaqajoojinta dhaqatiirta
Iyada oo shaqa joojinta qaran oo ay ku dhaqaqeen ururada dhaqatiirta iyo kalkaaliyaasha ay maalinkii sedexaad gashay ayaa waxaa maanta la filaya in ay kulan yeshan dhinacyada kala duwan ee Isfahan waagan u dhexeya.
Kualnakan aya noqonaya midkii sedexaad oo ilaa iyo hada wasiirka cafimadka Cleopa Mailu uu sheegayo in anan xal kama dambeys ah la gaarin balse ay sii wadayaan geedisocdka la xiriira in howlwadeenada ay shaqadoodu dib ugu laabtan.
Shalay ayey ahayd markii kulan la qorsheeyay unan qabsoomin kadib markii sida la sheegay sarakiisha ururka qaran ee KMPDU ay shirka isaga baxen halka ay dowlada ku eedeyen ain ay ku qasbeyso in ay shaqa joojinta soo afjaraan.
Ururka kalkaaliyasha ayanan kulankan ka qeyb gelin maadama ay doonaya in wasiirka caafiamadka iyo xoghayaha wasaradasi Dr. Nicholas Muraguri aynan ka mid noqonin gudiga arrintan ka wada hadlaya oona xal u raadinaya.
Dhanka kale saameynta ka dhalatay gadoodkan dhaqatiirta ayaa laga daremaya xarumaha caafimadka ee dalka oo ilaa iyo hada 19 ay u dhinteen daryeel caafimadka oo aynan heli awgeed.
← Gudiga IEBC oo sheegay in 30 bilyan oo shilin lagu qarsh gelinayo doorshada guud ee sanada 2017-ka
Madaxweynaha dalka iyo kuxigenkiisa oo mashaaric hormarineed ka furay deeganada Ukambani →